Ao Trinidad & Tobago, tratran’ny fahirano ny vehivavy, indraindray na ny voambolana aza tsy misy heriny · Global Voices teny Malagasy
'Te-hiteny aminao aho fa manana valiny, saingy tsy izany'
Voadika ny 09 Febroary 2021 4:42 GMT
Hosodoko an-drindrina avy amin'ny programan'ny tanandehibe azo antoka ao Guatemala, izay nanakaraman'ny UN Women [Firenena Mikambana vehivavy] ny sary ho anisan'ny 16 andro isa-taona ho fikatrohana iadiana tamin'ny herisetra mihatra amin'ny [lahy/vavy] tamin'ny taona 2017. Saripika avy amin'ny UN Women/Ryan Brown ao amin'ny Flickr, CC BY-NC-ND 2.0.
Naotin'ny tonia: nahitana fisongana famonoana vehivavy sy herisetra mifototra amin'ny maha-lahy/vavy ny Trinite sy Tobago tao anatin'ny taona maromaro, ka ny sasany amin'izany dia mifandraika amin'ny fisongan‘ny [mg] fanondranana olombelona [mg]. Tamin'ny 29 novambra 2020, nalain'ny mpamilin'ny fiaran'olontsotra ampanofanina – Private Hire (PH) iray ankeriny ny tanora Ashanti Riley; hita faty razazavavy io taty aoriana. Roa volana taorian'izany, ankehitriny, nisy naka an-keriny i Andrea Bharatt 23 taona, ka ny nahitana azy farany dia ny nanakanany taxi hitondra azy mody rehefa avy niasa izy tamin'ny 29 Janoary. Nanomboka tamin'io fotoana io, naneho ny fahatezerany, ny loniloniny, ny fangataham-bavaka, ny fiangaviana ny mba iverenany soa aman-tsara ao an-tranony ny mpikirakira media sosialy.
Manome fampahafantarana lalina amin'izay tsapa ao amin'ireo vehivavy tandindonin-doza ny poeta Trinidadianina Shivanee Ramlochan, izay nanoratra momba ireo vehivavy tanora sy ny olana herisetra mihatra manokana amin'ny lahy/vavy tamin'ny lahatsoratra Facebook iray. Navoaka manontolo eto indray izany nosorotany izany.
Manoratra poezia aho. Misy ny sehatra izay tsapa ho tsy misy dikany ny poezia. Andro maromaro miala avy amin'ny fakana an-keriny an'i Andrea Bharatt izany sehatra izany. Ny fitenin'ny fakana an-keriny no mpibaiko hentitra ao aminy:
“Nitady ny ala ry zareo ho an'ilay vehivavy.
Tsy hita izy.”
Indraindray ny habibian'ny voambolana no mahatonga ny fitaovan'ny poezia hikombom-bava. Nitady aho ny hanoratra poezia ho an'i Ashanti Riley, fa tsy nahavita. Ny karazana poezia tiako hosoratana momba an'i Andrea Bharatt dia poezian'ny fiverenana, fa tsy poezian'ny alahelo mahatsiravina.
“Tanora vavy iray miditra taxi.
Mitondra solaitra ‘H’ sandoka ny taxi.”
Rehefa mafy ny fiainana ary maherisetra ny olona (lehilahy), afa-manangana poezia avy amin'ny tsy misy fa tsy ny zavamisy ianao. Soratan'ny poezia ireo antso mitaky vola takalom-panavotana, fandrahonana fanetezana sofina, ny fihantomoran'ny fotoana (compte à rebours).
“Manana hoditra tsy fahita firy ny zanakovavy.
Mangataka aho, mangataka aho.”
Tsy te-hanoratra na inona na inona ankoatra ireo andrin-kafatra ho an'ny fianakaviana sy namana milaza fa hita i Andrea Bharatt. Raha afa-nanoratra izay tiako hosoratana aho, dia ho afa-miteny fa tsy novonoina i Ashanti Riley, niverina ho amin'ny fiainana hamangy tsy misy tahotra ny renibeny.
Fa tsy izany anefa, mihazona ny fisefoako aho. Fa tsy izany anefa, manankehitrio ny Google Search mandritra ny andro aho. Fa isaka ny mitendry ‘Andrea Bharatt’ aho, toloran'ny Google hevitra aho hanampy ‘found’ [hita] amin'ny karoka ataoko, mampihevitra fa manerana ny nosy kambana misy anay, dia tendren'ny olona matetika, am-pahamehana, anaty fanantenana lalina sy fatratra ny ‘Andrea Bharatt found’ [Hita i Andrea Bharatt]. Maniry aho mba tsy ho ao anaty fahakiviana ny fanantenantsika, saingy ao izany. Tsapa ny fahakiviana. Tsy mihevitra aho fa afa-manoratra poezia na andrana (=tantara) na zavatra ahafahana manohitra izany. Avy eo aho nahatsiarova iray amin'ny asa voalohany indrindra amin'ny fiasan'ny poezia ny vavaka.
Tsotra ny vavako.
Enga anie ho salama i Andrea Bharatt.
Enga anie tsy haninona i Andrea Bharatt.
Enga anie ho hita i Andrea Bharatt.
Ny tiako dia tontolo izay tsy mety ahafahana mamono antsika. Ny tiako dia nosy izay ifohazantsika sy idirantsika taxis izay ahazoana antoka feno fa tsy ho alaina ankeriny isika, ary tsy ho hita any amin'ny tranon'ny mpaka ankeriny antsika ny finday, karatra banky, na izay fitaovam-pidiovana sy fikarakarantsika vatana. Tiako ny hiaina eny sy tsy hatahotra. Tiako ihany koa izany ho aminao. Ho anao mba hitsahatra amin'ny fifohazana amin'ny telo maraina ka hijery eny an'arabe eo ambaravarakelinao izay ny fakantsary fanarahamaso ihany no mahita ny fahavoazanao, nefa tsy manavotra anao mandritra ny famelezana. Tiako ianao tsy hamihina ny fanalahidinao tahaka ny voditongotra. Tiako izao rehetra izao, mba tsy hahatonga anao ho mangidy-lela sy te-hamaly faty ny fanjavonan'ny olona eto an-tanindrazana.
Te-hiteny aminao aho fa manana valiny, saingy tsy izany. Ny poezia irery ihany, ary indraindray, tratra aoriana, tsy ireny akory aza.
Enga anie ianao hatory tsara, sy lalina, any amin'izay iondanan'ny lohanao rahalina.
Enga anie mba ho fantatrao ilay mpitondra taxi hidiranao rahampitso maraina, ho amin'ny toerana azo antoka isaka ny misefo.
Anisan'ny voatsonga tamin'ny loka Dennis Felix 2018 amin'ny amboara tsara indrindra andiany voalohany ny amboaran-tononkalon'i Shivanee Ramlochan tamin'ny taona 2017, Everyone Knows I Am a Haunting [Mahafantatra ny rehetra fa izaho no tahotra].